Shabakadda Amiirnuur – Page 96
Askar Ka Tirsan Koofur Galbeed oo Lagu Dilay Weerar Maanta Ka Dhacay Bay.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Bay ee Koofur galbeed Soomaaliya ayaa sheegaya in askar ka tirsan ciidanka Shariif Sakiin lagu dilay weerar qorsheysan oo ay fuliyeen dagaal yahano ka tirsan milatariga Xarakada Al-Shabaab. Weerarka oo ahaa nooca dhabba galka loo yaqaano kana dhacay duleedka degmada Qansaxdheere ayaa waxaa la xaqiijiyay […]
Kheyrre oo Saacadaha Soo Socda Eryi Doona Wasiirro Kuwa Kalana Magacaabaya.
Kadib markii wareegto kasoo baxday madaxweyne Farmaajo lagu eryay gudoomiyihii gobolka Banaadir ayaa warar aynu heleyno oo lagu kalsoon yahay sheegayaan in Xassan Cali Kheyrre uu isna doonayo inuu isku dhaandheyn ku sameeyo golihiisa wasiirada ee markii horaba qabyada ahaa. Ujeedada isku shaandheynta ayaa ah in golaha laga eryo wasiiro […]
Aqriso Shan Arrimood oo U Sabab Ahaa Isku Dhaca Farmaajo Iyo Thaabit.
Tallaabada xilka looga qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamad ayaa waxaa u sabab ah shan qodob oo uu ku wareegayay khilaafkii kala dhaxeeyay Farmaajo. Qodobka 1-aad: Thaabit oo mar walba iska bari yeelayay khalad walba oo uu Farmaajo ku dhoco, tusaale ahaan, markii la weeraray guriga C/raxmaan […]
Farmaajo oo Xilkii Ka Xayuubiyay Thaabit Kuna Bedelay Yariisow.
Madaxweynaha dowladda federalka ah Maxamad Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilkii ka qaaday gudoomiyihiisii gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamad iyo ku-xigeenkiisii sababo la xiriira khilaafkii waayahanba ka dhex jiray. Xilkan ayaa waxaa loo magacaabay Cabdiraxmaan Yariisow oo ahaa wasiirka Warfaafinta, waxaana haatan magaalada Muqdisho ka socda abaabulka kulamo ay siyaasiyiinta iyo odayaasha […]
Dhageyso Al-Shabaab oo War Kasoo Saartay Xasuuqii Ay Mareykanka U Geysteen Caruurtii Machadka Jiliyaale.
Hoggaanka Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa war kasoo saaray xasuuq ay ciidamo Mareykan ah iyo maleeshiyaadka Bangaraaf ay Jimcihii lasoo dhaafay ka geysteen deegaan dhaca halka ay iska galaan gobollada Sh/dhexe iyo Sh/Hoose. Sheekh Cali Dheere oo ah Afhayeenka Xarakada Al Shabaab ayaa kalimad uu jeediyay wuxuu ugu horrayn Beesha Gaaljecel […]
Mareykanka oo Qirtay Inuu Ku Lug Lahaa Weerarkii Caruurta Lagu Gumaaday Ee Sh/dhexe.
Marekanka ayaa si rasmi ah u sheegay inuu ku lug lahaa weerarkii habeen hore ka dhacay gobolka Shabeelaha dhexe ee gumaadka loogu geystay caruur arday ah oo baranayay cilmiga sharciga ah. Saraakiil sar-sare oo ka tirsan hogaanka ciidamada Mareykanka oo la hadlay TV-ga dalkaas ee “CNN” ayaa sheegay iney kaalin […]
Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa weerarkii fashilmay ee ay xalay Mareykanka la maaganaayeen magaalada Jamaame ee wilaayada Jubooyinka. Qaar kamid ah wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan ayaa tagay halkii uu dagaalka ku qabsaday ciidamada Mareykanka iyo kuwa calooshood u shaqeystayaasha ah waxaana uu laba meel kusoo arkay dhiigooda. […]
Ciidamada Mareykanka oo Ku Fashilmay Weerar Ay Xalay Ku Qaadi Lahaayeen Jamaame.
Askarta Xarakada Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal adag kala hor tagay ciidamo Mareykan ah oo doonayay iney weeraraan magaalada Jamaame ee wilaayada Jubooyinka. Wararka aynu ka heleyno khabarkan ayaa sheegaya askarta Mareykanka iyo calooshood ushaqeystayaasha Bankraft oo isticmaalaya dayuurado iney ku dageen duleedka magaalada iyagoo hadafkoodu ahaa in si xatooyo […]
Askarta Mareykanka ee loo yaqaano Bankraft ee fadhigoodu yahay garoonka Balli-doogle ayaa habeenkii xalay dhacdo wuxuushnimo ah ka geystay machad diinta islaamka lagu barto oo ku yaalla gobolka Shabeelaha dhexe. Ciidamadan oo ay wehliyeen kuwa Soomaali ah kuna socdaalayay dhulka iyaga oo wata Kaarayaal sidoo kalana dul heehaabayeen dayuuradaha Daroniska […]
Barnaamij Muhim Ah: Mala Socotaa Loollanka Ka Jira Qaaradda Afrika?
Barnaamijka Diiradda Jimcaha oo usbuuciiba maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan laguna soo qaato mowduuc muhiim ah ayaa waxaa maanta looga hadlay loollanka ka jira Qaaradda Afrika oo ah qaarad ballaaran kheyraadkuna dhex ceegaago, waxaana barnaamijka lagu marti qaaday aqoonyahanno xog iyo macluumaadyo badan ka bixiyay […]